बच्चाहरूमा एलर्जिक राइनाइटिस लक्षणहरूको रोकथाम र कसरी छुटकारा दिने बेजिया
बच्चाहरूमा एलर्जिक राइनाइटिस लक्षणहरूको रोकथाम र राहत कसरी दिने
मारिया जोस रोल्डन | 26/03/2021 22:00 | सल्लाह आमा
वसन्त theतुको आगमनसँगै त्यहाँ एलर्जीका धेरै घटनाहरू छन् जुन जनसंख्याको ठूलो भागमा देखा पर्दछ। बच्चाहरूको सन्दर्भमा, सबैभन्दा धेरै एलर्जी राइनाइटिसको रूपमा चिनिन्छ।
यो श्वासप्रश्वासको अवस्था घरको सबैभन्दा सानोको लागि धेरै कष्टकर छ किनभने यसले आँखामा महत्वपूर्ण जलनको साथ नाकमा कडा भीडको कारण बन्छ। अर्को लेखमा हामी तपाईंलाई सुझावहरूको एक श्रृंखला देखाउनेछौं जसले यी लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
1 बच्चाहरूमा एलर्जिक राइनाइटिसका लक्षणहरू के हुन्?
2 कसरी एलर्जी राइनाइटिस को लक्षण रोक्न को लागी
3 एलर्जी राइनाइटिसका लक्षणहरू कसरी हटाउने
बच्चाहरूमा एलर्जिक राइनाइटिसका लक्षणहरू के हुन्?
वातावरणमा परागकणको उपस्थिति बच्चाहरूमा एलर्जीको राइनाइटिसको मुख्य कारण हो। यस एलर्जीले नाकमा ठूलो मात्रामा बलगम र घाँटीमा निश्चित खुजलीको साथ आँखामा चम्किन्छ र जलन पैदा गर्दछ। यो लक्षणहरूको श्रृंखला हो जुन सानाका लागि ठूलो कष्टकर हो, तसर्थ तिनीहरूलाई रोक्न र हटाउने महत्त्व।
कसरी एलर्जी राइनाइटिस को लक्षण रोक्न को लागी
यो सम्भव भएसम्म घरको वातावरण सफा र शुद्ध राख्नु महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले नियमित आधारमा सम्पूर्ण घर सफा गर्नु आवश्यक छ।
तपाईंले पराग उत्पादन गर्ने बोटबिरुवाहरू हटाउनु हुँदैन र जनावरहरू जसले धेरै कपाल गुमाउँछन्।
बच्चाको कोठा हरेक दिन हावामा हाल्नु पर्छ र हप्तामा एक पटक ओछ्यान धुनुहोस्।
घर भित्र ड्राफ्ट बेवास्ता गर्नुहोस् र धेरै धूलैको साथ खाली ठाउँहरू।
दिनको धेरै पटक तपाइँको बच्चाको हात धुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी यदि ऊ सडकमा खेलिरहेको छ।
राम्रो खाना कुञ्जी हुन्छ जब यो एलर्जी नासिका सम्बन्धी लक्षणहरूको रोकथामको लागि आउँदछ। खाना फलफूल र तरकारीहरूमा समृद्ध हुनुपर्छ जसले भिटामिन सी समृद्ध छन् फोलिक एसिडको सेवनले एलर्जीबाट हुने सम्भावित लक्षणहरूलाई रोक्न आदर्श हो।
एलर्जी राइनाइटिसका लक्षणहरू कसरी हटाउने
ड्रग्स वा औषधीहरू कुञ्जी हुन् जब यो लक्षणहरू कम हुन्छ। दुबै एन्टीहिस्टामाइन्स र कोर्टिकोस्टेरोइड पर्चेको द्वारा प्रशासित हुनुपर्दछ।
त्यस्ता औषधि बाहेक, तपाईं सुझावहरूको शृंखलाको राम्रो नोट लिन सक्नुहुन्छ जुन उपर्युक्त लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ:
बच्चाको नाकको सफा र धुनुहोस् नुन समाधानको सहयोगमा।
ओछ्यानबाट ओछ्यान उठाउनुहोस् बलिया नाकमा जम्मा हुनबाट जोगाउन।
कोठामा एक ह्युमिडिफायर प्रयोग गर्दै यो महत्त्वपूर्ण छ जब यो आर्द्र वातावरण प्राप्त गर्न आउँछ।
धेरै पानी पिउँदा बलगम नरम हुन्छ र धेरै भरिपूर्ण नाक छैन।
आँखा सफा गर्नुहोस् गोज र थोरै खारा समाधानको साथ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा वसन्त theतुको आगमनसँगै एलर्जिक राइनाइटिस बच्चाहरूमा सामान्य देखिन्छ, भने एलर्जी को लक्षणहरु को तिनीहरू धेरै कष्टप्रद र असहज हुन्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि आमा बुबाले सबै सम्भावित रोकथाम उपायहरू लिनुभयो ताकि बच्चाले सकेसम्म सहजै जीवन बिताउन सकोस् र यसलाई माथि उल्लिखित एलर्जी राइनाइटिसले नोक्सान नपारोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मद्रेस » सल्लाह आमा » बच्चाहरूमा एलर्जिक राइनाइटिस लक्षणहरूको रोकथाम र राहत कसरी दिने
पारिस्थितिक पदचिह्न के हो र यसलाई कसरी कम गर्ने
Types प्रकारका भित्ता बत्तीहरू तपाइँको कुनाहरू रोशन गर्न